> Resource > Apps > Maxaad Apps shil ku macruufka 8 iyo Solutions
Sida laga soo xigtay tirakoob ka Cittercism taas oo ah shirkad Analytics ah, heerka shil App waa 65% ka sareeya macruufka 8 badan ee macruufka 7 ee isla muddadaas tan iyo markii la sii daayay. Oo waxaannu ka heli kartaa tan oo users ka cabanaya oo dhan cayn kasta oo Apps sida Facebook, Twitter iyo shil Evernote in forum Dood Apple.
Updates: Sida laga soo xigtay tirakoob ugu dambeeyay ka Cittercism, heerka App ay ka hartay ayaa hoos uga dhacay 3.6% (22-Sept) 2.6%, waana 19% ayuu ka hooseeyaa qalabka socda macruufka 8.1 marka loo eego kuwa ordaya ee macruufka 8 / 8.0.1 / 8.0.2.
Halkan waxa ku jira 2 sababaha ugu weyn ee keeni kara shil App ku macruufka 8:
1. isdiyaari, New
Sida aynu wada ognahay, tan oo hawlaha cusub ku daray in macruufka 8, oo waxaa jira ku dhawaad ​​laba jeer tirada isdiyaari cusub ka badan macruufka 7, si shaki la'aan waxa ka dhigi doonaa heerka shil app sare.
2. New Swift Barnaamijyada Language
Luqadda barnaamijyada Swift cusub sii daayay ayaa waxaa in xagaagaan kaas oo sidoo kale qayb ka mid ah sababta oo ah app shil waxay noqon kartaa, ma u san yahay, sidaa darteed mar walba waxaa jira dhibaatooyin la aasaasay iyada oo la isticmaalayo luqadda qaan oo kale.
Haddii aad dareensan tahay xumaaday oo ku saabsan sida app dhibaato shil ku macruufka 8, halkan waxaa ku yaal dhawr talooyin aad ku yeelan karto isku day ah.
1. Xidhitaanka App ee saxaarad Multitasking ah
Waxa ugu horeeya ee aan jeclaan lahaa in ay isku dayaan ayaa ku dhow app ay ka hartay in saxaarad Multitasking ah, karaankeeda app isla markiiba arrin oo sii daayo ka xasuusta arrinsashada qalab aad ka si ay u bilaabi kartaa cusub marka xigta ee aad u furo. Sida aynu wada ognahay, xogta gaarka ah waxay noqon kartaa sabab suuragal ah in barnaamijyadooda hartay, si hoos app iyo in dib loo bilaabayo waxay u badan tahay in xal u heli karo dhibaatadaada xidhay.
2. Hard howleheedii
Howleheedii adag had iyo jeer waa isku day fiican si ay u xaliyaan nooc kasta oo dhibaato iPhone. Xir dhammaan barnaamijyadooda iyo demi aad iPhone marka hore, fadlan la sii haysta Home & buttons Power ilaa shaashadda ka jarto dibna jeedsada on mar kale iyo bandhigayaa logo Apple ah.
3. CUSBOONAYSIINTA daryaan Apps ah
CUSBOONAYSIINTA ee Chine hartay in nooca ugu dambeeya kaas oo la jaan qaada macruufka 8, waxa ay xal u heli karo shil barnaamijyadooda ku saabsan arrimo 8 inta badan.
4. Casriyaynta ee macruufka updates ugu dambeeyey
Haddii la xariirta app version ugu dambeeyey weli ma hagaajin karaa dhibaatada, waxaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso macruufka aad 8 ilaa ugu dambeeyay ee aad, Apple had iyo jeer sii daayo lahaa iyo updates sida riixdo in dadka isticmaala si uu u xaliyo dhibaatooyinka sida app shil ku macruufka 8.
5. Soo Celinta Your iDevice
Soo celinta aad iDevice si uu u xaliyo shil barnaamijyadooda ku saabsan arrimo 8 waa fursad la soo dhaafay waxaad isku dayi kartaa. Waxaad u baahan tahay si ay u helaan in goobaha guud ee dib qalab aad goob warshad. Laakiin fadlan xasuuso in gurmad xogta aad ka hor, resetting warshad u tirtiri doonaa dhammaan xogta ku saabsan qalab aad.
Guud ahaan, ku xusan 5 xal xallin karo inta badan dhibaatooyinka shil app, halka haddii aad leedahay xal kale oo wax ku ool ah in ay la wadaagaan ama ay weli ma hagaajin karaa dhibaatada ka dib markii isku dayaya oo dhan oo iyaga ka mid, aad dhaweeyay in hoos ku qoran faallo.
iPad 2 gaabis ah ku macruufka 8/9? Isku day Solutions Kuwani in dayactir daalid Performance iyo Hadhi